खुसिको खबर : सोच्नै नसकिने गरी ह्वात्तै घ'ट्यो प्याजको मूल्य ! - Prateek Nepal
खुसिको खबर : सोच्नै नसकिने गरी ह्वात्तै घ’ट्यो प्याजको मूल्य !
काठमाडौं । भारतले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपछि आकासिएको प्याजको मूल्य बिस्तारै घट्न थालेको छ ।भारतले आन्तरिक उत्पादनमा कमी आएको भन्दै गत भदौ २९ गतेदेखि प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्याज निर्यातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध भारतले पुस १७ गते अर्थात् अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षबाट हटाएको हो । प्रतिबन्ध हटाउँदा बढेको प्याजको मूल्य अहिले घ’ट्न थालेको हो ।
ओलीको पक्षमा खुलेरै लागे देउवा र थापा, सरकार र चुनाबा बारे यस्तो भयो सहमति !
‘कसैले चाहेर पनि नेपालमा मृ’त्युद’ण्डको व्यवस्था लागू गर्न सक्दैन’
October 6, 2020 October 6, 2020 Ramash kunwar
विप्लव समूहले सार्वजनिक गर्‍यो नेपाल बन्दसहितका संघर्षका कार्यक्रम